अर्थ / बजार Archives - News 88 Post
Category: अर्थ / बजार
पेट्राेल, डिजेलकाे मूल्य घट्याे
June 25, 2022 N88LeaveaComment on पेट्राेल, डिजेलकाे मूल्य घट्याे
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको निगम सञ्चालक समिति बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमले पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेल/मट्टीमा २९ रुपैयाँ मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ । अब पेट्रोलको मूल्य १७९ र डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यमा १६३ रुपैयाँ भएको छ । सरकारले […]
June 23, 2022 N88LeaveaComment on सर्वसाधारणलाई अप्पर सोलुको आइपिओ आउँदै
काठमाडाैं । अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले सर्वसाधारणमा साधारण शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यही असार २० गतेदेखि प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित रु १९ करोड ५७ लाख ५० हजार मूल्य बराबरको १९ लाख ५७ हजार ५०० कित्ता साधारण शेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बिक्री खुला गर्न लागेको हो । कम्पनीले कूल निष्काशनको […]
काठमाडाैं । सुनचाँदी बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ४०० ले घटेर रु ९७ हजार ३०० मा आएको छ । पहेँलो धातु अघिल्लो दिन प्रतितोला रु ९७ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ९६ हजार ८०० छ । यसको मूल्य अघिल्लो […]
June 22, 2022 N88LeaveaComment on दोर्दी खोलाको आइपीओ बाँडफाँट, भाग्यमानी ९ जना !
काठमाडाैं । दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ। कम्पनीले जेठ २६ गतेदेखि निष्काशन गरेको आईपीओ आज बिहान ९ बजे बाँडफाँट भएको हो। कम्पनीको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको कार्यालयमा सो आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो। कम्पनीको आइपीओमा १४ लाख ७१ हजार ६६५ आवेदन परेको थियो। सोमध्ये १४ लाख ७० हजार ७८३ आवेदन स्वीकृत भएको […]
नेप्से परिसूचकको हरियाली एक दिन पनि टिकेन
June 9, 2022 N88LeaveaComment on नेप्से परिसूचकको हरियाली एक दिन पनि टिकेन
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा बुधबार भएको हरियाली एक दिन पनि टिक्न सकेन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने उच्च अङ्कले उकालो लागेको थियो । तर, आज भने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक १७.६४ अङ्कले ओरालो लागेर दुई हजार […]
युवराज खतिवडाले गरेको गल्ती सच्याएपछि १०–१० रुपैयाँले घट्यो पेट्रोल डिजेलको भाउ
June 2, 2022 N88LeaveaComment on युवराज खतिवडाले गरेको गल्ती सच्याएपछि १०–१० रुपैयाँले घट्यो पेट्रोल डिजेलको भाउ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको भाउ घटाएको छ । बिहीबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँले घटाउने निर्णय गरेको हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० रूपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलको मूल्य १५३ रूपैयाँ पर्नेछ । खाना पकाउने ग्यास […]
May 29, 2022 N88LeaveaComment on यस्ता छन् बजेटका २० नारा र अभियान
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न २० वटा नयाँ नारामार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अगाडि सारिएका नाराले समग्रतामा यर्थाथतालाई सम्बोधन गरिएको टिप्पणी गरिएको छ । सरकारको बजेटमा आगामी आव आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुने […]
सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढ्यो, कसको कति ? (तलबमानसहित)
May 29, 2022 N88LeaveaComment on सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको तलब बढ्यो, कसको कति ? (तलबमानसहित)
काठमाडाैं । सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै सरकारी निकायको तलब वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । निर्णयअनुसार निजामति कर्मचारीको तलव वृद्धिपछि सुरु स्केल यसप्रकार छ, जसमा ग्रेड भने समावेश गरिएको छैन। कर्मचारीको पदअनुसार प्रतिवर्ष […]